DHAGEYSO:Ururka KUPPET oo doonaya in baarlamaanka uu dhaqaale dheeraad ah u qoondeeyo | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Ururka KUPPET oo doonaya in baarlamaanka uu dhaqaale dheeraad ah u qoondeeyo
DHAGEYSO:Ururka KUPPET oo doonaya in baarlamaanka uu dhaqaale dheeraad ah u qoondeeyo
Xoghayaha qaran ee abaabulka ururka macallimiinta ee KUPPET Paul Maingi oo warbaahinta kula hadlay ismaamulka Siaya ayaa sheegay in ay u ololeyn doonaan sidii golaha xeer dejinta uu u kordhin lahaa miisaaniyadda loo adeegsado dallacsiinta barayaasha.
Mr. Maingi ayaa hoosta ka xarriiqay in hadda dhaqaalaha arrinkan ku baxo sanadkii uu yahay 2 bilyan oo shilin.
Miisaaniyaddan ayuu sheegay in ay aad u yar tahay marka la eego kumannaan macallimiin ah oo aan in muddo ah loogu kordhin heerka shaqo.
Mas’uulkan ayaa hadalkan jeediyay xilli ismaamulka Siaya lagu doortay hoggaamiyaasha KUPPET ee dowlad deegaankaas iyadoo saraakiil uu ka mid yahay xoghayaha fulinta Sam Opondo ay xilalkoodii difaacdeen.
Mr. Maingi ayaa sheegay in ugu yaraan 100,000 oo macallimiin ah ay codsadeen in la dallacsiiyo balse sida uu hadalka u dhigay dhaqaale la’aan awgeed ay u suuragashay 10,000 oo keliya.
Waxaa uu sheegay inay doonayaan in baarlamaanka uu miisaaniyadda sanadlaha ee ah 2 bilyan uu ka dhigo ugu yaraan 6 bilyan.
Sidoo kale waxaa uu hoosta ka xarriiqay in ururka macallimiinta ee KUPPET uu diyaar u yahay in uu la kulmo guddiga adeegga barayaasha ee TSC si loo billaabo wada-hadallo ku saabsan heshiiska xiga ee mushaar kordhinta.
Dhanka kale guddoomiyaha cusub ee ururka macallimiinta ee KUPPET laanta Wajeer ayaa sheegay in si caddaalad ah lagu soo doortay sida uu ku soo warramayo Cabdiraxmaan Mucaawiye .
Previous articleHindise sharciyeedka BBI oo berrito la hor geynaya golaha hoose ee Nairobi
Next articleMidowga musharaxiinta oo guddoomiyaha baarlamaanka la kulmay